Boliska Malaysiya oo hakiyay khudbad uu jeedin lahaa Siyaasi CCWarsame “Villa Somalia oo warbixin qalad ah bixisay”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wararka ka imanaya dalka Malaysia ayaa shegaya in booliska dalkaasi ay ku wargaliyeen siyaasiga cabduraxmaan cabdishakuur warsame oo munaasabad ku qabsan lahaa dalkaasi gaar ahaan magalada kulalambuur in la joojiyey .
Boliska ayaa shegay in safaarada Soomaliya Ee dalkaasi ay ku wargalisay in cabdiraxmaan cabdishakuur uu dallka jarmalka ka jeediyey qodbad oo diinta islamka wax kaga shegay sidaas darteedna ay jiraan dad badan oo islaam ah oo u careysan.
Balse siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur oo la hadlay warbaahinta qaar waxa uu shegay in munaasabadii ay u qabsoontay kadib markii booliska ay kulmeena ay u sheegeen in warbixin qaldan la siiyey.
Previous articleDAAWO:- Puntland oo caawa soo saartay Digniin ku saabsan Duufaano kusoo wajahan Xeebaha Bari ee Deegaanadeeda.
Next articleDowladda Somalia oo soo bandhigtay sargaal muhiim u ahaa Alshabaab oo ay isku soo dhiibay.
Ahmed January 13, 2020 At 10:35 am
Siyaasigan anigu gacan ayaan u taagay. Waa siyaasiga keli ah ee ay Dawlada Xaarmaajo aadka uga cabsato. Xaarmaajo daacuun ayaa ku dhaca mar kasta oo uu arko siyaasigan. kkkkkkkkkkkk
Dil buu is yidhi oo wuu dili kari waayay. Cabudhi buu is yidhi oo wuu cabudhin kari waayay. Qeylo iyo buuq iyo sawaxan ku fur buu is yidhi oo wuu shiiqin kari waayay. Meel walba oo uu tago ama istaago wey dabo taagan yihiin. Haduu kharashka iyo wakhtiga iyo tamarta uu ku baxshay ka dabo shaqeynta siyaasigan ku bixin lahaa inuu geliyo Dawladiisa shaqo wacan ayuu qaban lahaa.
Siyaasigani taageeradayda wuu istaahilaa. Waxaanu ku kasbaday waa isagoonba farba dhaqaajin ayuu Xaarmaajo shuban kaga keenay. Imikana talaabo kasta oo uu qaado Xaarmaajona suuliga ayuu ku cararaa si’aanu shubanka iskugu sii deynin. kkkkkk